> Resource > Windows > Sida loo isticmaalo Qalabka Digital sawrirrada
Haddii aad tahay qof aqoon leh Photoshop ama Rinji Shop Pro, oo dhan ee aad u baahan tahay inaad samayso waa furan asalka ah, jiita in ka badan sawiro qaar ka mid ah, embellishments sawrirrada, iyo badbaadin! Laakiin kuwa aan aqoonta aasaasiga ah ee PS ama PSP, doorashada ugu fiican waa in ay doortaan mid ka mid yar barnaamijka "sawrirrada". Halkan waxay leedahay Hanuuniye gaaban inaan idin ​​baro sida loo isticmaalo xirmooyinka sawrirrada digital in iCollage for Mac - an collage Mac sawir iyo sawrirrada qalab tallaabada fudud oo xiiso leh talaabo.
1 Bilow abuuro sawrirrada digital ka bog maran
Download version maxkamad free of Digital Photo Software iyo waxa maamula. Qalabkani waxa uu aad bixisaa laba siyaabood oo wax sawrirrada ah digital: ka bog maran, ama ka soo marto collage. Waxaad dooran kartaa template maran si ay u bilaabaan abuuro sawrirrada digital ka bog maran.
Sawrirrada Qalabka Talooyin:
Wixii goobaha faahfaahsan oo dheeraad ah slideshow FLV, riix badhanka Settings iyo sheeg doorasho kala duwan, sida encoder, xallinta, heerka jir, heerka yara iyo goobaha cod ah.
1. Waxaad ku shuban kartaa sawir aad jeceshahay ka disc sida asalka collage. Wargeyska ayaa ku xirmo scrapbooking digital unzipped la keeno karaa sida soo jeeda.
2. Marka aad astaysto size collage, inaad si fiican u lahaa inaan ka fiirsan size ee sawirka asalka iyo leben la xusho, xarunta ama style stretch.
2 dar iyo xaalkaa photos aad
Si fudud u jiidi oo hoos u sawiro aad ka guddi ka tagay si ay ugu collage. Haddii loo baahdo, ka faa'iideystaan ​​edit sawir qalab inay sameeyaan qaar ka mid ah hawlaha aasaasiga ah ee photos aad sida ku daray hooskii, dalagga, flip, isku shaandheyn, qufulka, iwm
3 Import xubno scrapbooking digital ka kit iyo qurxin collage ah
Demi in "qurxin collage" oo ay helaan "Clipart" tab. Waxaa jira sideed nooc clipart in liiska sanduuqa. Waa in aad dooratid nooc "Customize" ah. Hadda waxaad ku dari kartaa xubno scrapbooking digital in aad diyaariso in aad isticmaasho ka qalabka unzipped iyada oo "Ku dar ..." badhanka hoose ee tab clipart. Hubi in xubno aad keeno waa la tusay doonaa guddi bidix. Si aad u codsato waxyaabaha ay u collage aad abuuray, kaliya jiidi oo hoos u meel aad rabto. Fiiri! Collage waxaa lagu qurxiyey mid bowknot iyo afar marsami ka Spring Green ka Kit. Si ay u tilmaamaan theme ee collage ah, halkan isticmaalaan oo ka mid ah "Text" tab ay ku darto caption ah "hab u guga".
1. Wixii element kasta collage ah, waxaad isticmaali kartaa Ctrl + C si ay nuqul oo Ctrl + V in paste.
2. Ka sokow noocyada kala duwan, waxa kale oo aad ku dari kartaa halation iyo texture in aad caption Added.
4 collage Save sida qaabab sawir ama si toos ah print
Kadib markii uu dhamaystay collage ah, waxaad badbaadin kartaa sida qaabab sawir oo kala duwan sida JPG, PNG, bmp, tiff, iwm ama si toos ah u qotomiyey sidii aad wallpaper. Isticmaalka "Print collage" button, collage sawir heer sare ah waxaa loo dhiibi doonaa in aad isla markiiba. Haddii aad jeclaan khariidad aad loogu talagalay, qaado oo kaliya ka faa "Mashruucan Save" ama "Save sida mashruuca" in "File" menu si aad u hesho file mashruuca loogu isticmaalo ee soo socota.
Tani waa dhamaadka tutorial ku saabsan sida loo isticmaalo xirmooyinka scrapbooking digital, ayaa aad waxa ay haatan u helay? Maxaad ma bilaabaan samaynta scrapbooks digital kuu gaar ah iyo iyaga oo meel kasta wadaagaan ?!